သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: အရောင်
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:23 AM
ဟုတ်တယ် နော် မအိမ့်
အိတို့ဆီမှာ လည်း ဆံပင်တွေ
blonde နဲ့တူအောင်အရောင်ဆိုးတာ ..ဖြောင့်တာကောက်တာ တေ့ာ ပြောမနေနဲ့.
တစ်ချို့လည်း တစ်မျိုးတည်းဆို ကြာတော့ ပျင်းလာလို့နဲ့ တူပါတယ် ..
တစ်ချို့ကျတော့လည်း အတူတူချင်းတောင် သူများလက်ထဲက မုန့်ကမှပိုချိုတယ် ဆိုသလိုပေါ့..
plastic surgery နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အမြင်နဲ့.. သဘာဝ အလှနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အမြင်ကတော့ အိလည်း မအိမ့်နဲ့ အတူတူပဲ ..
သဘာဝ အလှကို တော့ ပိုသဘောကျ တာပေါ့လေ ..
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလေ စွန်လွှတ်လို့ အသားညိုတယ်သိလား
ပြီးတော့ မန္တလေးရောက်သွားတော့ အသားမည်းမှာစိုးလို့ လက်ရှည်ဝတ်ရာက အသားဖြူလာတယ်
ရန်ကုန်ရောက်တော့လေ နေပူထဲမှာ လျှောက်သွားရင်း အသားမည်းသွားပြန်ရော.
ခုဒီရောက်တော့ ၁၂ ရာသီအေးနေတာနဲ့ အသားပြန်ဖြူလာတယ်.
စကားမစပ်. မလေးက ဖြူလားညိုလား.
ကျမလဲ သဘာဝအလှကို ပိုကြိုက်သလိုပဲ အိရေ.. အိ ကျမစာတွေကို အမြဲအားပေးတာ ကျေးဇူးနော်။
လူဖြူတွေ မျက်စိထဲမှာ ညိုပြီး၊ လူမဲတွေ မျက်စိထဲမှာတော့ ဖြူမယ်ထင်ပါတယ်။
အမှန်ပဲ..မလေးရေ..ဒီက ဂ တွေလဲသူတို့ရဲ့ဝင်းနေတဲ့အသားကိုညိုအောင်လုပ်ကြတယ်..
ရှက်စရာ ပုံတွေမတင်ပါ နဲ့ 
ံhuman nature ကိုရှက်တော့ ကျနော် က human မဟုတ်ဘူနဲ့ တူတယ်